थाहा पाउनुहोस् काठमाडौंमा कतिदिनसम्म जोर–बिजोरमा कुद्नु पर्ने हो ? – Daunne News
थाहा पाउनुहोस् काठमाडौंमा कतिदिनसम्म जोर–बिजोरमा कुद्नु पर्ने हो ?
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा बिहीबारबाट ४ दिनको लागि जोर–बिजोर प्रणाली लागु गरेको छ ।
काठमाडौंमा मंसिर १४ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुन लागेको एसिया प्यासिफिक समिटलाई व्यवस्थित गर्न जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म ह्यात रिजेन्सीमा हुन लागेको एसिया प्यासिफिक समिटमा ७ देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी हुँदैछन् ।
अर्कातिर भने सर्वसाधरणलाई जोर–बिजोर प्रणालीले निकै नै सास्ती बनाएको छ । ठाउँमा समयमा नपुग्दा तथा भनेको समयमा गाडी नपाउँदा ट्याक्सीमा जानु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । ट्याक्सीले पनि जोर–बिजोरको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दो भाडा असुली रहेको छ ।